Efrijini Indesit SB 185: izici, indawo, ukubuyekezwa
Ngezinye izikhathi isidingo esikhundleni esiqandisini kwenzeka ngokuzumayo. I kuhlulekile iyunithi edala ngeke ilungiswa, ngaphandle leli thuluzi emikhayeni banamuhla akunakwenzeka. Kulesi simo, isikhathi ukukhetha esikhundleni uyakufanelekela kancane kakhulu. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi banesifiso etheni. Kodwa ungakhohlwa ukuthi lokhu kuthenga eminyakeni kangakanani ezayo, ngakho nokwethenjelwa imbala kufanele kube kakhulu. Ngenhlanhla, ngo-Kwimakethe kukhona models ongaswele abathengi qualitatively ukufeza umsebenzi wabo, futhi lithembekile umsebenzi wabo kuphawulwa abathengi abaningi kakade sezilithathile indawo. Enye yalezi onobuhle kuyinto esiqandisini Indesit SB 185.
lwati lolufinyetiwe nomkhiqizi
Kude hhayi wonke umuntu uyazi ukuthi umlando isisekelo inkampani kwaqala 30s kwekhulu elidlule. Kubhekwa umsunguli Italian usomabhizinisi A. Merloni. Nokho, igama ajwayelekile Indesit Inkampani lithole kamuva kakhulu. Namuhla, le brand ikhiqizwa ngokuhlanganyela nezinye aziwa, Hotpoint Ariston. Ukuya amafriji, kuhlanganise Indesit SB 185, emzini Russian of Lipetsk kubuchwepheshe futhi ilawulwa amaNtaliyane.
Kuze kube manje, umenzi ungumnikazi cishe 15% wemakethe umthengi, osuvele ukhuluma ngani kulesi silinganiso ibhizinisi. Uthando abalandeli babo namakhasimende inkampani iye yazuza ngokusebenzisa izinto zobuchwepheshe obuphambili, intengo ezinengqondo futhi ezahlukahlukene.
I izici eyinhloko imodeli
Imbala lokuqala Indesit SB 185 efana ubulili fair, okuyinto a lot of ukunakwa egxile izici zangaphandle. Echachambile bezinhlamvu ezimhlophe surely alingeni kunoma yiziphi ingaphakathi ekhishini.
Umthamo izinga imayelana 339 amalitha, okuyinto wenza sikwazi ukusebenzisa nomndeni kubantu 5. Nge i operation lula enembile, nobunzima ukusebenza ngeke kwenzeke.
Le modeli kungokwalabo B ikilasi, ngakho abakwazi ukhathazeke ekukhokhweni ugesi izikweletu. Phela, inani ukusetshenziswa ngonyaka akuyona ezingaphezu kuka 445 kW.
I share ekamelweni ukupholisa cishe 235 amalitha. Zonke isikhala lihlukaniswe emashalofini ezenziwe ngengilazi obukhulu futhi iqine. Ngakho-ke, ngo-ikhamera kungenzeka ukubeka okuzikhulula esindayo.
Efrijini kokuba ivolumu 104 amalitha. Eneqhwa ngesandla kuyaqabukela kunesidingo. Ngenxa kufanale agqoke izikhindi zangaphansi ivulekile, ungakwazi ukugcina imikhiqizo kwanoma iyiphi isigaba bese emqulwini ngokwanele ezinkulu. Zeqhwa umthamo ubuye ngempela ehloniphekile - mayelana 4 kg ngosuku.
Seziqa Indesit SB 185 is bephonsa defrosting uhlelo. Futhi, ibizwa ngokuthi "ukukhala udonga". uhlelo ezinjalo akubandakanyi fan. Small ice ungqimba kwakhiwa okuyinto ku kususwa udonga lwangemuva egumbini esiqandisini is defrosted ngezikhathi, amanzi ageleza emgodini efanele. Ngokusebenzisa lingena isitsha ketshezi ngokufanele ngaphandle kususwa udonga lwangemuva imbala. Gilazi ayidingi ukuba zihlanzwe. Ngo kokuhlinzwa, condensate cooler iyasha. Uma sihlaziya umbono amakhasimende mayelana imodeli Indesit SB 185 Izibuyekezo zalesi simiso eneqhwa kuyinto oqondile. Iqhwa "noboya coat", njengoba ku ubudala amafriji Soviet, abumane.
lokushisa Ubuncane zigcinwe efrijini - -24 ° C abangu incibilikiswa ngesandla. Uma efrijini selulayisheke inqwaba imikhiqizo, ungasebenzisa inketho "Superzamorozka"
Amafriji nge bephonsa uhlelo defrosting, kuhlanganise Indesit SB 185, Kunconywa ukukhubaza ngokuphelele njalo ezinyangeni 6-8 ukugeza futhi ususe frost okuholela egumbini efrijini.
Ukwahlulela nge izibuyekezo mayelana Indesit SB 185 esiqandisini, ivelele phakathi kwabafowabo. Kusuka libanzi futhi sibonga kwamacala defrosting uhlelo ongenalo "odla" ivolumu zisebenziseke Ayikho uhlelo Frost. Hhayi ezinomsindo, nakuba abaningi ukudida Class B. Ngaphambi Ukuthenga Kumhambela abajwayele, ukuthi inani elikhulu kumadivayisi ezifana A noma A +. Kodwa besigaba sesibili musa ibakhathaze abasebenzisi ngesikhathi umsebenzi wabo. Lokhu futhi kufakazelwa Izibuyekezo eziningi.
Efrijini Indesit SB 185 ezimhlophe kwakuvumelana kunoma iyiphi elingaphakathi. Muhle ubude - 185 cm, okwenza kube ivulekile. With ikhono ekuhleleni kabusha umnyango, idivayisi kungenziwa efakwa ngokuphelele yimuphi engela.
WokuLawula lokushisa egumbini esiqandisini lokukhanda.
Ukuphathwa luyatholakala kwi iphaneli engenhla ngenhla umnyango ekamelweni esiqandisini, ngaphandle. Uma umuntu emnyango uvalwe waqiniswa noma ukhohlwe ukukwenza kwisiqandisi ngomzuzu ngempela ukunikeza ukwazi ngakho.
Kwabaningi zomthengi wanamuhla inzuzo enkulu imbala Indesit SB 185 kuyinto wentengo okungabizi. Izindleko Isilinganiso ruble 17000-25000, kuye endaweni yokudayisa. Ukuze esiqandisini okusezingeni eliphezulu elinezimfanelo ezifana kuyinto izindleko ezanele.
Ukuba khona noma ukungabi khona ikhono ukushintsha indawo emashalofini
I gumbi esiqandisini has emashalofini eziningana ukuthi wabelane isikhala ezivamile zibe yizicucu iyunifomu. Nokho, kuzo zonke umndeni kukhona izitsha okusezingeni eliphezulu ukuthi angeke abeke kule wokusabalalisa. Njengoba nomkhiqizi uthi izifiso amakhasimende abo, ke yenziwe yaba khona ukulungiswa ezimele isikhundla emashalofini kuye ngezidingo wabanikazi ubuchwepheshe.
Ngokwe impendulo kwabanye abasebenzisi, ngezinye izikhathi ngobugebengu emakhoneni emashalofini, uma imikhiqizo Ukuboshelwa basakaza. Lapho esindayo umthwalo eshalofini nhlobo ungeme. Kufanele kucatshangelwe ngesikhathi ukusebenza nokusatshalaliswa imikhiqizo.
Ukuhlaziya izibuyekezo zamakhasimende, ungagqamisa izinzuzo ezilandelayo imodeli:
ukuguqulwa Ukhululekile emashalofini, ukushintsha ukuphakama yokubeka.
Ngisho nalapho kusetshenziswa ku naphakathi amandla esiqandisini ubhekana imisebenzi yawo, futhi kuvimbela ukungasebenzi.
It uyagijima buthule.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela iphunga plastic, ngisho kwaleli washi elisha.
Ukuze uthole amandla amancane intengo emakamelweni amabili ezinhle.
Isebenza ngaphandle kwe-intanethi ukuze amahora 15. Lokhu kukuvumela akesabi eneqhwa esimweni wawuhamba eziphuthumayo.
Imbala Indesit SB 185, njengoba kunoma iyiphi inqubo, nemiphumela ethile engathandeki abalandelayo waphawula:
Zingenzeki zangaphansi efrijini plastic ngokuvamile iphula off lapho sicindezelwe ngephutha.
Uphawu ushingamu phakathi saqala nini ukusebenza kudlule umoya, ngenxa lapho amaseli frost kwakhiwa.
Inkinga yesibili kalula ixazululwe ngokuthi esikhundleni izingxenye. Ukulungisa kulokhu akudingi imali eshisiwe. Njengoba for amabhokisi, kuyodingeka yayala at ogunyaziwe nezikhungo zomsebenzi.
Indesit Inkampani ecishe ibe ikhulu ejabulisa amakhasimende ayo nge izinga nobuchwepheshe ethembekile. Yiqiniso, ngokubona abasebenzisi kungaba kuphela khuluma ngezinto kokuhlaziywa subjective. Wonke umuntu izintandokazi ezahlukene, ukunambitha, futhi efanayo zasendlini izidingo. Ngakho, nakuba abantu bakubo ungazami le model isinyathelo, hlola umkhiqizo kuyoba nzima kakhulu.
Uma ubheka izinga jikelele, anikeza abasebenzisi, singabona amaphuzu kunalokho okusezingeni eliphezulu isilinganiso. Ukutholakala ngokwezezimali Yiqiniso, kuthinte isinqumo, ngakho zonke umthengi kufanele futhi uqaphele lokhu.
Tachometer imoto: isabelo izinhlobo
Soundbar "Samsung": Izibuyekezo ikhasimende
Okuvame kakhulu amaphutha esipelingi
Handicrafts eyenziwe birch namagxolo ngezandla zakhe: master emakilasini amabili
Ikhekhe "Eskimo" - i-dessert yasekuqaleni
IPhone kabusha: ukuthi kusho nokuthi ingabe uyafisa yini ukuthenga?
Izifo Ukwelashwa ENT: uwoyela peach ekhaleni
Kuyini emali nokuthi ukubala